Europe Aisirendi Reykjavik
Tsvaga nzvimbo dzakanakisisa dzekugara paunoshanyira guta guru reIceland
Nemahombekombe anoshamisa, mapikisa, matsime anopisa, mazamu, mazaya uye Aurora Borealis, Iceland inofanira kunge iri pane imwe nzvimbo yevashandi vekufambira. Guta rayo guru, Reykjavik, inzvimbo yakanakisisa kuti uzive nyika yechitsuwa, uye vamwe vanofanira-vanoshanyira nzvimbo iyo kereke yakakurumbira, Hallgrimskirkja, National Museum yeIceland uye Dillon Whiskey Bar kuti nguva inofadza. Hazvizivi kuti ndekupi kunotsvaga mushure mekuongorora zuva kana usiku wekuparadzanisa ( zvakanyanyisa , guta rinozivikanwa nokuda kwehusiku hwayo)? Verenga rondedzero yedu yematunhu gumi akakwirira muReykjavik, Iceland.
Iri hotera huru yeimba yepahotera iri munzvimbo ine tsika "chivako 101" pedyo neLaugarvegur neSkolavordustigur, nzvimbo huru dzekutenga, uye ine mitambo yebasa rehotera yechishanu-nenyaradzo yekugadzirisa semusha. Zvose zvivako zvakagadzirirwa zvakakwana kitchenettes nefriji, sitofu uye microwave, flat-screen TV uye iPod docking magetsi (iPads anowanikwa mari shoma yekubhadhara). Deccor yakaisvonaka uye yemazuva ano, ine zvigadziridzo zvepayumu zvisikwa, mapuranga pasi uye mabhati akaiswa zvakanaka. Pane maawa 24 ekufambirwa kwemaawa anoenda pamusoro nepamusoro kuti abatsire vatenzi, basa rekutengesa taxi, uye mabhasiki ezvokudya zvigadzirwa mangwanani. Kupakirwa kwe-site kunogumira; zvisinei, kupararira mumugwagwa kunowanikwa nyore nyore.
Imakiromita mashanu kubva kunzvimbo yekutarisa yeReykjavik inonzi Hafnarfjordur, guta duku rinonakidza iro rinozivikanwa kuti ndiro rimwe remakamuri makuru ezvitsuwa muIceland (maererano nevanogara). Imba 71-hombe, Hotel Hafnarfjordur inotora makiromita makumi maviri motokari kuenda kuBlue Lagoon kana maminitsi gumi kuenda Reykjavik, uye inopa nzvimbo dzakachena uye dzakanaka pane imwe nzvimbo yemadhorobha emadhorobha. Dzimba Dzakadzika Dzimba dzekamuri dzakakura kubva pamakiromita masendimita makumi matatu kusvika ku 365 makumbo mana uye dzine matanda pasi, mazuva makuru emawindo, mafaro anofadza, mubhedha uye terevhizheni (kunyange zvisinganyatsovharidzirwa). Kunewo nzvimbo yekusununguka yekontinende yekusununguka, yokupaka uye WiFi.
Akafuridzirwa nebhuku reIcelandic photography, Skuggi Hotel imwe yezvitsva zvitsva zveReykjavik, zvine mavara emicheka esirivha, ghena uye machena zvinopesana nemifananidzo yakajeka, yakarembera chiedza chenyika yakawanikwa munzvimbo dzakawanda. Kune nzvimbo 100 dzekugara, asi chidiki chiduku chema 139 masendimita makumbo, zvichiita kuti zvive zvakanaka kumunhu anenge achifamba ari oga achitsvaka minimalistic-style room marongerwo nezvimwe zvinhu zvakadai semapurogiramu-terevhizheni, mahwendefa ekunyora, WiFi isina kusununguka, misoro yemvura inonaya uye kofi uye teti. Vashanyi vanogona kutora kofi inokurumidza paresitoresi kana kufarira buffet yemangwanani. Panewo nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo uye nzvimbo yekuchengetera iyo vashanyi vasina kubatana vanogona kusanganiswa, nzvimbo yepakombiyuta uye mahwindo ekuzvidzivirira. Ihotera iri matanho kubva kuSundhollin mabhati evanhu, Solfar zvakavezwa, uye Hallgrimskirkja, kereke yakasikwa yakagadzirwa.
Ndiine makamuri 147, Icelandair Hotel Reykjavik Marina ndeimwe yepamusoro muchengeti rehotera yeIcelandair uye iri pedyo nechiteshi chechikepe, mukati mekufamba-famba kune nzvimbo dzakawanda dzekudyara uye zvinonakidza. Zvifananidzo zvakasiyana-siyana zvinoratidzwa munzvimbo yose inoratidza mararamiro eIcelandic nyika, uye pane nguva dzose pane chimwe chinhu chiri kuitika paSlippbarinn, iyo inofadza mumba mokudyira uye bhari. Pakupera kwevhiki kune DJ inoratidzika, panguva yebrunch kune mafirimu evana uye neChitatu bhiza rinorarama rinotora kusvika panhandare. Sip pahotera yakagadzirwa, shanduro itsva yezvokudya zvekudya kana kuwana mangwanani inotanga zvakanaka nekutengesa buffet (nokuda kwekuwedzera mari). Zvivako Zvitsuwa zvinowanikwa chic, maritime yakafuridzirwa kuronga rusvingo murals, matanda pasi, mazuva ano mabhati uye firimu-screen tv. Ihotera haina kupa nzvimbo yekupaka, asi pane zvakawanda zviri pedyo.
Imba inogara yakakurumbira muReykjavik, uye yakakosha kumhuri iri kutsvaga mamiriro ezvinhu akafanana neimba uye yakawedzerwa nzvimbo. Yakatarisana nemakiromita mashanu kubva pamusuo weReykjavik Harwendo, iyo nhatu dzimba dziri panzvimbo dzakasiyana uye dzakachengetedza makicheni uye nzvimbo dzakagara, uyewo mararamiro anofamba-mumvura inopisa nemhepo inoshanda, jet sprays uye special foot massager. Pasi-pasi peimba inosvika vatenzi vatatu uye inopa nyore kuwana mhuri. Uyezve, pane sarindi rega rega, highchair uye makanda (pamusoro pekumbiro) uye doro rekudya zvishomanana riri pedyo nezvinhu. Iko kusina dafura rinotarisana naro iwe unogona kuona pane imwe nzvimbo hotera, saka kupinda muimba yacho kuburikidza nekupinda kwekodhi.
Inowanikwa munzvimbo huru yekutenga, Alda Hotel inzvimbo yakanaka, hoteri yekutengesa ine yepamusoro yebasa uye nzvimbo itsva, dzakanaka. Mahwende anosanganisira mahwindo eWIFFI, mafirimu makuru-firimu, mafirimu uye slide, uyewo mafoni ekushandisa paunenge uri kunze kwekuongorora guta. Unwind muimba yepamusoro, fambidzana navamwe vafambi paBarber Bar muimba yekuchengetera vanhu, shingaira mubasa rekuchengetedza muviri, soak mudiki kana mudziyo wekudya wekushambidzika (kune imwezve yebhadharo). Hakuchina kusarudzwa kwekupaka, asi pane zvakawanda zviri pedyo (zviri pamatsetse).
Takaenda mumugwagwa wakanyarara muReykjavik, asi mukati mokufamba kure neresitorendi, mabhairi uye zvitsuwa, Butterfly Guesthouse inzvimbo inofadza, inofadza uye ine ushamwari yekubata pasi usiku. Mitengo yakanyatsonaka, asi inowirirana zvichienderana nehuwandu hwevanhu vanogara, ukuru hwemukamuri uye kana ine chikwata chakagoverana kana chemberi. Vashanyi vanogona kushandisa kicheni chikuru kana nzvimbo inowirirana yekugara, uye kudya kwekudya kwekudya kwekudya, kofi uye muesli (yakafanana ne granola) inosanganiswa. Mhuri-inowanikwa uye inoshandiswa, iyi inzvimbo yakanaka yekubatana nevamwe vaeni, uye mauto ane ushamwari uye kugamuchirwa.
Nzvimbo dzeNorth Lights dzinogona kuonekwa muIceland kubva munaSeptember kusvika munaEpril, asi kuitira kuti vaone vashanyi vazofanira kurega kubva kune zviedza zveReykjavik. IKruines Hotel inowanikwa nemaminitsi makumi maviri motokari kunze kweguta (saka kuva nemavhiri inokosha) pedyo neLake Ellidavatn, saka avo vane mukana wekugara apo magetsi vabuda kunze vanogona kuona mavara anoonekwa kubva kune chinyanja ichi. Ihotera yechitanhatu-imhuri inoshandiswa, uye ine zvigaro zvakadai sebar, sauna, hot tub, makomo mabhasiki, kayaks, kupaka pasina uye kambomusi. Mahwendefa akajeka akareruka, asi akakwana, ane terevhizheni-terevhizheni, WiFi uye maonero akanaka echikepe.
Zuva Regore Idzva muReykjavik, Iceland
Gay Nightlife muReykjavik
The Most Unbelievable Reykjavik Day Trips
Top 9 Attractions in Reykjavik
Budget Hotels muIndia
Western Spirit: Scottsdale Museum yeMadokero
Tora Rwendo Rwokubva Kubva OKC kusvika kuTulsa
Ndeipi mafoni efoni anotora mafirimu akaisvonaka?
6 Nzvimbo dzakakurumbira dzekushanyira muGoa
The 9 Best Connecticut Ski Hotels dze 2018
Prague munaJune - Weather, Zviitiko, uye Mazano
Zuva Rose Vatsvene muPoland neLithuania
Nzira Yokugadzirira Sei Svondo Weather muPoland
Nzira Yokufambisa Nzira Yokushanyira Philadelphia paItabhenji
Getaway yemufirimu weLin Angeles
Nzira Dzokuwana Hamuri Hamilton muNew York City
September 2018 India Festivals uye Zviitiko